UKHALA NGAMAPHOYISA 'AMQHATHE' NOMAKHELWANE - Ilanga News
Home Izindaba UKHALA NGAMAPHOYISA ‘AMQHATHE’ NOMAKHELWANE
UKHALA NGAMAPHOYISA ‘AMQHATHE’ NOMAKHELWANE
UMNU Mlungisi Mchunu othi usha-ywe ngamaphoyisa ethi uyathinteka kwelokufa kukamakhelwane wakhe.
UYABALISA othi ushaywe ngamaphoyisa, emphoqa ukuthi makavume ukuthi unalo ulwazi ngecala lokuqothwa kwamalungu amane omndeni wakwaZuma, eSabuza, kwesaKwaMthethwa, eMpangeni ngeledlule. UMnu Mlungisi Mchunu ushayele ILANGA elibikela ngokumehlele. Ngokusho kwakhe, amaphoyisa afike kubo amthatha, athi uyasoleka ecaleni lokufa kukaMnu Siphiwe, uMnu Nkosingiphile (Mvelo), uMnu Mpumelelo Zuma noMnu Mhlonipheni Mwandla, abangomakhelwane wakhe.
Uthi ngesikhathi efika esiteshini samaphoyisa bamvalele yedwa, bamshaya bemfake ishubhu, bethi makavume ukuthi wayexhumana nababulali ngomakhalekhukhwini. “Ngiwatshelile amaphoyisa ukuthi angawubheka umakhalekhukhwini wami ngoba le nto ayishoyo kangiyazi, angishaya ethi mangivume ngenkani. “Angishaye kusukela ngo-12 kwaze kwaba u-4 (ntambama) ephuza utshwala, abuyela kimina angishaye aze angilengisa ngezinyawo zombili, ikhanda lilengela phansi. “Amaphoyisa angishaye ngaze ngazishiyela, ngiwachazela ukuthi kangiyazi le nto aqhubekile angishaya,” kusho uMnu Mchunu.
Uthi ngakusasa bamkhiphile esitokisini, bamtshela ukuthi sebebatholile abenze icala, usengaphindela ekhaya, bamnika u-R20 wokugibela. “Kangikwazi nokuhamba kahle ngilimele, amehlo avuvukele bathi mangihambe nginjalo. Ngibuye ekhaya indaba isigcwele, abantu bekhuluma ngayo ukuthi ngiboshelwe icala lokubulala omakhelwane bami. Kangisaphephile. “Ngithe uma ngifika ekhaya, udaba lwabikwa enduneni, baya emndenini wakwaZuma beyosho ukuthi sengibuyile, amaphoyisa angidedelile ngoba ethi kangithinteki ecaleni, kodwa kawabange eseza emndenini ukuwubikela ukuthi kangithinteki kuleli cala.
“Kuyangcwatshwa mina kangikho, ngisekubhaceni, ngesaba ukwenzakaliswa ngenxa yamaphoyisa angiqhathe nabantu ebesiphilelana nabo, maqede ama le kude, mina sengiyisitha komakhelwane bami,” kusho uMnu Mchunu. Uthi uzamile ukuyovula icala lapho ebhace khona, amaphoyisa amkhomba eMpangeni ngakubo lapho kwenzeke khona icala, wangakwazi ukuya ngoba ebhacile. UMnu Makhosonke Mthethwa oyinduna yesizwe sakwaMthethwa, uthi lolu daba lufikile kuyena lulethwa ngunina womfana, emuva kokuba umfana ebethathwe ngamaphoyisa emsola ngokuthi uyathinteka kuleli cala.
“Ngibe sengimphelezela unina siya emndenini oshonelwe, siyowazisa ukuthi umfana usebuyisiwe, kuthiwa icala kalimthinti. Bathi abomndeni kungani kungezi amaphoyisa azosho wona ukuthi akathinteki, kuza bona. “Sibe sesiwafonela amaphoyisa sikhona emndenini wakwaZuma, athi amdedele ngoba bungekho ubufakazi obumhlanganisa necala. “Bamthatha nje, umufi, uMvelo, wangitshela ukuthi bawu-7 abafunekayo okuthiwa bazobulawa, wababala okukhona kubona naye lona wakwaMchunu, kodwa manje obesethathiwe ephenywa ngokufa kwabo,” kusho induna. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Colonel Nqobile Gwala, uyalele uMnu Mchunu ukuthi makaye esiteshini samaphoyisa eSikhawini, afike acele umphathi wesiteshi ukuze ezosizakala kuvulwe icala.
Previous articleKuzoqiniswa imigomo esikoleni ebesivaliwe
Next articleUNDUNANKULU UTHI BAZOHOLWA NGONDLUNKULU KOLOMKHULEKO WESILO